घर एशियाई-ओशियनियन फुटबल स्टोरीहरू ली कang्ग-इन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो ली कांग- जीवनी तपाइँलाई उसको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुन कारहरु, नेट वर्थ, जीवनशैली र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरु बताउँछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो दक्षिण कोरियाली फुटबलरको जीवन कहानी हो, बाल्यकालदेखि, जब उनी प्रसिद्ध भए। तपाइँको आत्मकथा भूख मिल्नको लागि, यहाँ उनको बाल्यावस्था वयस्क ग्यालेरीमा छ - एक उत्तम सारांश ली कang्ग-इनको बायो।
ली कांग - को जीवन र उदय।
हो, तपाईं र म उहाँको बहुमुखी प्रतिभा र कस ठाउँहरु मा बल कब्जा कायम गर्न को बारे मा थाहा छ। यद्यपि तपाईले ली कang्ग-इनको जीवनी पढ्नु भएको छैन जुन एकदम अन्तर्दृष्टि हो। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
ली कang्ग-इन बचपन कहानी:
सुरुमा, ली क -्ग-इन दक्षिण कोरियाको इनचान शहरमा फेब्रुअरी २००१ को १ th तारिखमा जन्मेको थियो। उहाँ थोरै ज्ञात आमा र उनका बुबा अन-सेओ Lee लीमा जन्मेका तीन भन्दा कम बच्चाहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ।
यंग ली आफ्नो जन्मस्थल ईन्चियोनमा (जुन दक्षिण कोरियाको तेर्सो सर्वाधिक जनसंख्या भएको शहर हो) देशको उत्तरपश्चिम भागमा दुई ठूली दिदीबहिनीसँग जन्मेकी थिइन् जसका नाम उनले खुलाउन सकेका छैनन्।
युवा ली कang्ग-इन एशियामा हुर्किएको ठाउँमा हेर्नुहोस्।
ईन्चियनमा हुर्केका, जवान ली शारीरिक विकास र फुटबलमा रूचि भएको बच्चा थिए। उनले पाँच वर्षको उमेर भन्दा पहिले नै फुटबल खेल्न शुरू गरे, बचपनको खेल जुन तायक्वान्डोको प्रशिक्षणसँग मिलेको थियो।
ली कang्ग-इनले football बर्षको उमेर भन्दा पहिले नै फुटबल खेल सुरू गर्यो।
यो याद गर्नु उपयुक्त छ कि फुटबल र ताइक्वान्डोमा लीको रुचि अचानक थिएन। उनीहरूले चासो दिए कि उनले बुबाको पछि लागेका थिए, जुन दुबै ताइक्वान्डो शिक्षक र एक फुटबल उत्साही थिए।
नतिजा स्वरूप, लीसँग उनका बुवा र नजिकको परिवारको अनन्त समर्थन थियो। उनीहरू आशावादी थिए कि फुटबलमा उसको प्रारम्भिक जीवनको चासोको सुखद अन्त हुनेछ, जस्तो कि यो आशाजनक शुरुआत थियो।
ली कang्ग-इनको परिवारले उसलाई खेलमा राम्रो शुरुआत सुरक्षित गर्न मद्दत गर्‍यो र युवाका लागि शुभ भविष्यको आशा थियो।
ली कang्ग-इनको शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप:
आशावादी शुरुवातको कुरा गर्नुहोस्, के तपाईंलाई थाहा छ कि जवान ली केवल years वर्षको थिए - विशेष गरी फेब्रुअरी २००१ को १ day तारिखमा - जब उसले आफ्नो छेउछाउमा फुटबल खेल सुरु गर्यो
उसले neighborhood बर्षको उमेरदेखि उसको छिमेकको लागि खेल्न सुरु गरे।
यो धेरै समय भएको थिएन जब फुटबल उन्माद उसको स्कूलको फुटबल टीमको सदस्य बन्न पुग्यो किनकि त्यस समयमा उसको उमेर (year's बर्ष उमेर) का बच्चाहरूको लागि कुनै आधिकारिक कोरियाली प्रतिस्पर्धा थिएन।
ली कang्ग-इनको फुटबलमा प्रारम्भिक वर्षहरू:
ली6बर्षको उमेरमा, ऊ पहिले नै एक स्टन्डआउट स्थानीय खेलाडी भइसकेको थियो। विकासले आत्मविश्वासका साथ उनले टेलिभिजन स्पोर्ट्स रियलिटी फुटबल शोमा भाग लिएको देखे जुन शूट-डोरी भनेर चिनिन्छ। धेरै भन्न जरूरी छैन, लीले कार्यक्रममा असाधारण फुटबल प्रदर्शनहरू राखे, एउटा विकास जसले असंख्य कोरियालीहरूको मन जित्यो तर उनको टोलीले शोको पुरस्कार जित्यो।
फुटबल रलिटी शोको सेटमा फुटबल प्रोडिगीको दुर्लभ क्याप्चर।
त्यस पछि, चीजहरू कॅरियरको रूपमा लीको लागि छिटो देखिन्छ। उनी २०० Sang मा इन्चियोन युनाइटेड एफसी यु -१२ युवा टोलीमा भाग लिनु भन्दा अघि उनले प्रशिक्षण दिएका थिए। उनी २०० Sang मा युन सांग Ch चुलको युवा एकेडेमीमा पहिलो थिए। त्यसपछिको शुरुआती क्यारियर चालले ली फ्लाइ for्ग्स एफसीको लागि खेल्दा ऊ इन्चियोनको सीओकजेong्ग इलिमेन्टरी स्कूलको विद्यार्थी भएको थियो। ।
ली कang्ग-इनको जीवनी - प्रख्यात कथाको लागि रोड:
२०११ मा लीको क्यारियरको मोड तब आयो जब उनले स्पेनको भ्यालेन्सिया सीएफमा ट्राउटको लागि गएर आफ्नो क्यारियरलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउने प्रयास गरे। युवा खेलाडीहरूले यो महसुस गर्न धेरै समय लिएन जुन लीले विशेष खेलाडी थिए उसले बललाई केही छोएर हेरे पछि।
यद्यपि, भ्यालेन्सियाले कडा मांग गर्यो जसको लागि लीको परिवार भ्यालेन्सियामा उसको साथमा आउनु पर्छ। अनुरोध - जसको लीका अभिभावकले हो भनेर हो - भ्यालेन्सियाले १० बर्षे कोरियन भर्ती गरेको जस्तो देखिन्छ कि उनीहरूले नाबालिगमा हस्ताक्षर गरेर कानून भ broken्ग गरेको जस्तो देखिदैन। तैपनि, यो माग हो जुन लीको द्रुत विकासमा सहयोग पुर्‍यायो।
भ्यालेन्सियामा जवानको विकास द्रुत थियो। उसको परिवारलाई धन्यवाद छ जसले उहाँसँगै बस्ने निर्णय गरे।
ली कang्ग-इनको जीवनी - फेम टु फेम स्टोरी:
भ्यालेन्सियामा आगामी वर्षहरूमा खेलाडी शक्ति, उचाई र रणनीतिहरूमा वृद्धि भयो। उनीसँग क्लबको असंख्य स्तरहरूमा बढ्न कुनै समस्या थिएन र अन्ततः लस चेसको लागि अक्टोबर २०१2को th० तारिखमा Eb० तारिखमा सीडी एब्रोलाई २-१ कोपा डेलको जीतमा पहिलो टिमको पहिलो डेब्यू बनायो। डेब्यूसँगै ली कान्छो कोरियाली भए। यूरोप मा एक पेशेवर डेब्यू गर्न फुटबलर।
आगामी महिनाहरूमा, लीले नियमित रूपले ला लीगा र यूरोपा लिग देखा पर्‍यो। उनले २०१० फिफा अण्डर २० विश्वकपमा रनर अपको रूपमा दक्षिण कोरियालाई प्रभावशाली टु .्गोमा पनि पुग्यो र टूर्नामेन्टका सर्वश्रेष्ठ खेलाडी भएकोमा गोल्डेन बल पुरस्कार पनि जित्यो। यो उपलब्धि अरूले पनि लीले २०१ 2019 मा एशियाली युवा फुटबलर बन्ने देखा। बाँकी, उनीहरू भन्छन, इतिहास हो।
२०१ Lee लीको वर्षहरू ठूला सफलताहरू थिए।
ली कang्ग-इनको प्रेमिका ?:
ली कang्ग-इनको जीवनीमा यो मस्यौदा अपूर्ण हुनेछ यदि हामी उसको प्रेम जीवनको बारेमा तथ्य दिन असफल भयौं, विशेष गरी यो प्रेमिका उनीसँग सम्बन्धित छ। दुःखको कुरा, त्यहाँ यस सम्बन्धमा कुनै अवस्थित जानकारी छैन।
जुन तरिकाले हामी यो चित्रण गर्छौं, लीले भ्यालेन्सिया पहिलो टीममा आफ्नो स्थान पक्का गर्न धेरै ध्यान दिइरहेका छन् जहाँ उनी सिताराहरूको साथ खेल्छन्। फेरन टोरेस, डेनियल परेजो र Rodrigo Moreno। लामो समय सम्म नहुन सक्छ जब प्रेमिका अन्ततः ली जीवनशैली को समीकरण मा फिट हुन्छ।
हामी सम्भावितबाट सचेत छौं कि उहाँ पूर्ण गर्लफ्रेंडको लागि गम्भीरतापूर्वक खोजी गर्दै हुनुहुन्छ।
ली कang्ग-इनको पारिवारिक जीवन:
ली कang्ग-इनको बाल्यकालको कहानी सँधै सुन्दर र प्रेरणादायी पढाइ हुन्थ्यो। उसको परिवारलाई धन्यवाद, जसले सम्भव बनायो। यहाँ हामी तपाइँलाई ली कांगको बारेमा आमाबुवाहरू र उनको परिवारका सदस्यहरूका बारे तथ्यहरू दिन्छौं।
ली कang्ग-इनका बुबा र आमाको बारेमा:
अन-सेong्ग ली, लीको बुबा, एक टकवेन्डो शिक्षक र फुटबल उत्साही छ। यद्यपि लीको आमाको बारेमा धेरै थाहा छैन। जे होस्, हामी जान्दछौं कि दुबै आमा बुबा बुबाले आफ्नो जीवन र आफ्नो छोरोको फुटबल आकांक्षालाई भ्यालेन्सियामा बसेर उनीहरूको समर्थन गर्न दक्षिण कोरियामा भएका सबै कुरा त्यागे। ली उनीहरूलाई समान उपायमा मनपर्दछन् र उनीहरूलाई गर्व दिनको लागि उत्तम प्रयास गर्छन्।
ली कang्ग-इनका आमाबुवाहरूको बारेमा धेरै ज्ञात छैन।
ली कang्ग-इनका भाई-बहिनीहरू र आफन्तहरूका बारे:
ली कang्ग-इनको जीवनीको बारेमा अनलाइन रेकर्डले बताउँदछ कि ऊसँग दुई कम ज्ञात ठूली बहिनीहरू छन्। त्यहाँ उनको भाइको बारेमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन। यस्तै, मिडफिल्डरको पुर्वावस्थाको कुनै रेकर्ड छैन विशेष गरी यो हजुरबा हजुरआमासँग सम्बन्धित छ। न त उनका काका, काकी, काकी, भतिजा, भतिजा र भतिजीहरू चिनिन्छन्।
ली कang्ग-इनको व्यक्तिगत जीवन:
ली कांग-इनको पारिवारिक जीवन अन-पिच पेन्चन्टबाट टाढा विपक्षी रक्षकहरूको लागि टाउको दुखाइको रूपमा रहेको, उसको अफ पिच व्यक्तित्वको बारेमा तथ्य र विचार दुवै एकमत र मनमोहक छन्। फ्यानहरूले उहाँ नम्र, भावनात्मक हिसाबले संचालित र रचनात्मक भएको तथ्यलाई स्वीकार गर्छन्।
प्रभावशाली मिडफिल्डर जसको राशिफल साइन मीन हो नियमित रूपमा केहि गतिविधिहरू संलग्न गर्दछ जुन आफ्नो रुचि र शौकहरूको लागि पार गर्दछ। तिनिहरु फोटोहरु को लागी राख्नु, संगीत सुन्न, यात्रा, इन्टरनेट को सर्फ, पौडी खेल्ने र परिवार र साथीहरु संग राम्रो समय बिताउने मा शामेल छ।
नेट सर्फिंग उसका एक शौक हो।
ली कang्ग-इनको जीवनशैली:
ली कang्ग-इनले कसरी आफ्नो पैसा कमाउँछ र कसरी खर्च गर्छ भन्ने सम्बन्धमा, २०२० सम्म उसको कुल सम्पत्ति १ मिलियन डलर छ। मिडफिल्डरको ठूलो हिस्सा ज्याला र तलबबाट आउँछ जुन उनी युरोपको शीर्ष लीगमा फुटबल खेल्न पाउने गर्दछन्।
साथै, लीले अनुमोदनबाट महत्वपूर्ण पैसा कमाउँछन्, एक विकास जसले उहाँ बस्नुहुने विलासी जीवनशैलीको औचित्य पनि प्रस्तुत गर्दछ। यस्तो जीवनशैलीको प्रमाणमा मिडफिल्डरको महँगो सवारीको स includes्ग्रह र उहाँ स्पेनमा बस्ने घर / अपार्टमेन्टको महँगो प्रकृति समावेश गर्दछ।
उदीयमान एशियाई फुटबलरको कुल मूल्य १,००,००० डलर छ।
ली कांग-मा तथ्यहरू:
तपाईले लि कang्ग-इनको बाल्यकाल कहानी र जीवनीमा ठूलो सम्झौता पढ्नुभयो। यहाँ तपाईको पूरा तस्वीर पाउन तपाईलाई मद्दत पुर्‍याउन बेवास्ता गरिएको वा कम ज्ञात तथ्यहरू छन्।
तथ्य # 1 - तलब ब्रेकडाउन:
लेख्ने समयमा, लीको भ्यालेन्सियासँगको सम्झौतामा उसले लगभग २€,००० डलर कमाई गरेको देख्छ। उसको आम्दानीलाई सानो टुक्रामा तोडदै हामीसँग निम्न छ।
पढ्नुहोस् रियो मियाचिटी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
यूरोमा वेतन (€)
पाउन्डमा वेतन (£)
डलरमा तलब ($)
प्रति वर्ष € 1,197,840 £ 1,041,600 $ 1,294,396
प्रति महिना € 99,820 £ 86,800 $ 107,866
प्रति हप्ता € 23,000 £ 20,000 $ 24,854
प्रति दिन € 3,286 £ 2,857 $ 35,506
प्रति घण्टा € 136.9 £ 119 $ 1,479
प्रति मिनेट € 2.29 £ 1.9 $ 24,657
प्रति सेकेन्ड € 0.04 £ 0.03 $ 0.4
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो ली कang्ग-इनबायो, यो उसले कमाएको हो।
। £ ०
वाह! के तपाईंलाई थाहा छ?… दक्षिण कोरिया मा औसत व्यक्ति जो मासिक € २,2,411११ कमाउँछ लगभग करीव काम गर्नु पर्छ तीन वर्ष6महिना ली कang्ग-इन्स मासिक तलब कमाउन।
तथ्य #2- ट्याटूहरू:
उनको कोरियाली समकक्ष जस्तै - छोरा हेङ-मि, लीसँग अहिलेसम्म कुनै ट्याटू छैन, र उनी सायद कुनै पनि प्राप्त गर्दैनन्। मिडफिल्डरको राम्रोसँग आफ्नो तौल (K 68 केजी) हेर्ने र उसको उचाई (feet फिट inches इन्च) भन्दा राम्रो बनाउनको लागि रुचि हुन्छ।
के तपाईंलाई थाहा छ ली २०२० को रूपमा १ अ points्कको फिफाको खराब रेटिंग छ? रेटिंग्सले खेलाडीले गरेको महत्वपूर्ण सुधारहरू प्रतिबिम्बित गरेको छ जो कोरोनाभाइरस महामारीको प्रकोप हुनु अघि चैम्पियन्स लिग खेलहरूमा नियमित सुविधाहरू पाउँदै थियो। यसप्रकार, हामीले मिडफिल्डरको रेटिंग्सले उसको 71 2020 पोइन्टको सम्भाव्यता झल्काउनु अघि यो केही समयको कुरा मात्र हो।
उसले त्यसबेलादेखि सुधारहरू गर्यो जसले उसलाई उसको his 88 को सम्भावित मूल्या rating्कन प्राप्त गर्न नजिक ल्यायो।
२००१ ली कang्ग-इनको जन्म वर्ष मात्र होईन। यो वर्ष हो जुन विकी फ्री-सामग्री ज्ञानकोश विकिपेडियाको रूपमा चिनिएको अनलाइन भयो। यो वर्ष पनि हो जुन एप्पल कम्प्युटरले आइपड जारी गर्‍यो। त्यस वर्षको प्लेट्स अफ दि एप्स, श्रेक र ओशिन इलेभन जस्ता मनोरञ्जनात्मक दृश्य फिल्महरूमा हिट भए।
पढ्नुहोस् यसका लागि उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईन्छ
तथ्य #4- सैन्य छुट:
दक्षिण कोरियाका पुरुष नागरिकहरूले कम्तिमा २१ महिनाको अनिवार्य सैन्य सेवामा जानुपर्दछ। जहाँसम्म, देशलाई फुटबल कप शीर्षक जस्ता प्रमुख सम्मान जित्न मद्दत गर्नेहरूको लागि छुट छ। लीले अहिलेसम्म आफ्नो देशको लागि कुनै उपाधि जितेको छैन। यद्यपि उनले दक्षिण कोरियाको यु २० टिमलाई विश्वकपको सेमीफाइनलमा पुर्‍याउन राम्रो प्रदर्शन गरे पनि उनका प्रयासहरू छुट पाउनका लागि पर्याप्त थिएनन्।
त्यस्तै, उसले २ jail बर्ष उमेर भन्दा पहिले छुट्टयाउन सकेन भने जेल जेल वा देशबाट प्रतिबन्धको जोखिम। उसको कोरियाली समकक्ष सोन हेung्ग-मिनीले २०१ 28 मा एसियाली खेलकुदमा दक्षिण कोरियालाई स्वर्ण जित्नको लागि अग्रसर गरेर छूट कमाएको थियो। ली टोलीको एक हिस्सा हुनसक्थ्यो, तर उनीसँग चिन्ता थियो कि उसले मौका छोड्छ।
आक्रमण गर्ने मिडफिल्डरले एक सम्भावित क्यारियर अनिवार्य सैन्य सेवा बर्बाद गरेको सामना गर्दछ यदि उसले छुट पाउन असफल भयो भने।
ली Kang-in जीवनी - विकी डाटा
पुरा नाम ली कang्ग-इन
जन्म मिति फेब्रुअरी १ ​​th day day १ 19
आमाबाबुले अन-Seong ली (बुबा)
सोख फोटोहरूको लागि प्रस्तुत गर्दै, संगीत सुन्न, यात्रा गर्दै, इन्टरनेट सर्फ गर्दै, र पौंडी खेल्दै।
उचाइ5फिट 8 इन्च
नेट मूल्य € 1,000,000
खेल्दै स्थिति। मिडफिल्डर आक्रमण गर्दै
ली कांग-इनको जीवनी को बारे मा यो मूल लेखन को लागी धन्यवाद। मा लाइफबोगर, हामी वितरणको हाम्रो लगातार तालिकामा निष्पक्षता र शुद्धताका लागि प्रयास गर्दछौं जीवनी तथ्यहरु र बाल्यकालका कथाहरू. के तपाईंले यस लेखमा अनौंठो लाग्ने केहि देख्नुभएको छ? कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस वा तल बक्समा टिप्पणी राख्नुहोस्।